Hiigsigii iyo himiladii fogayd: Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar (1952kii – 2012ka) Qormadii: 4aad ilaa 6aad Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale – Araweelo News Network (Archive)
Waxa kale oo uu sannadkaa 1972kii ahaa sannadkii la sharciyeeyay qoraalka Afka Soomaaliga. Saaxiibbadeen Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan iyo Dr. Cabdishakuur iyaga oo ku jira shaqadii Qaranka ayay bilaabeen in ay bartaan Hanti-wadaagga iyaga oo
abaabulay wareegyo (circles) dhallinyaro ah oo ay tababari jireen oo ay bari jireen Hanti-wadaagga. Xataa Cartan waxa uu ii sheegay in uu mararka qaarkood Dr, Cabdishakuur ku booqan jiray magaalada Boorame. Waayadaa, Dr. Cabdirashakuur Sheekh Cali Jowhar, waxay Boorame isku baranayaan Nimco Xuseen Giirre oo ay magaalada Qaahira isku guursadeen xilli la iigu sheegay 1976kii. Iskuma ay raagin, ubadna isumaay yeelan.
Somaliland: Qiimee Qofkaaga si aad qiimo u yeelato! By: Rashiid Sulub Caalin, Hargeysa Somaliland